चितवनमा चार हजार दुई सय पाँच घर बने - नेपालबहस
विश्वमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या सात लाख १८ हजार नाघ्यो
४६४ जनामा संक्रमण, ४२५ जना डिस्चार्ज !
चितवनमा चार हजार दुई सय पाँच घर बने
२२ कार्तिक, चितवन । भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरमध्ये चार हजार २०५ घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा हालसम्म ६३ प्रतिशत घर बनेका हुन् ।
जिल्लामा रहेका सात हजार ३३५ लाभग्राहीमध्ये चार हजार २०५ जनाले आवास निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता बापतको रकमसमेत लगिसकेको कार्यालयका इन्जिनीयर सुभाष न्यौपानेले जानकारी दिए । लाभग्राहीमध्ये ६ हजार ६२९ जनाले पहिलो किस्ता लगेका थिए ।
न्यौपानेका अनुसार दोस्रो किस्ता पाँच हजार २५३ जनाले प्राप्त गरेका छन् । भूकम्प प्रभावितहरुले आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजार, दोस्रो किस्ताबापत रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताबापत रु एक लाख प्राप्त गर्ने छन् ।
भरतपुर महानगरपालिका–३ नारायणगढमा रहेको भृकुटी बोर्डिङ स्कूलको आयोजनामा आज देखि तीन दिनसम्म भृकुटी नमूना स्काउट क्याम्पोरी २०७६ शुरु हुँदैछ । नेपाल स्काउट चितवनको संरक्षकत्वमा जिल्लामा चौथोपटक क्याम्पोरी हुन लागेको हो ।
कार्यक्रम संयोजक रामु पाण्डेका अनुसार क्याम्पोरीमा चितवनसहित १४ जिल्लाका ८०० विद्यार्थी र २०० जना रोवर, रेञ्जर र शिक्षक सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । क्याम्पोरीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको उनले जानकारी दिए ।
स्कूलका प्राचार्य रामजी पाण्डेका अनुसार क्याम्पोरीमा सहासी, मनोरञ्जनात्मक र बौद्धिक तालीमसहित विभिन्न गतिविधि गराइनेछ । युवालाई दुव्र्यसनबाट रोक्ने र रचनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ क्याम्पोरी गर्न लागिएको हो । ११ देखि १६ वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई स्काउट भनिन्छ भने १६ देखि २५ वर्षसम्मका युवालाई रोवर र युवतीलाई रेन्जर भनिन्छ ।
स्कूलका सहायक प्राचार्य होमनाथ न्यौपानेका अनुसार आज फ्याग होस्टिङ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने शनिबार साँझ ५ बजे ग्र्यान्ड क्यामफायरसहित उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
न्यौपानेले गएको शैक्षिक सत्रमा एसइई परीक्षामा निकै राम्रो नतिजा पाएकै वर्ष भव्य कार्यक्रम गर्ने अवसर विद्यालयले प्राप्त गरेकामा विद्यार्थीहरु उत्साहित भएको बताए।
Previous articleEducation Policy Unveiled : Envision Developing Nepal As An Outstanding Educational Hub
Next articleप्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपचुनावमा लागि ६५ उम्मेदवार
कोरोना फैलिन नदिन राजमार्गका होटलमा निगरानी
कोरोना कहर : धराशायी बन्दै सञ्चारमाध्यम
बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याइदै, अध्ययन समिति गठन
काेराेनाका कारण टोयोटा कारलाई लाग्याे चुना ! ७ खर्ब घाटा
हावाहुरीले बालीनाली सखाप, लाखौँको क्षति !
शुक्रबार र शनिबार ललितपुरमा दिनभर बत्ती जाने
प्रचण्डले बामदेवलाई साेधे ‘अब तपाईं के गर्नुहुन्छ ?